ဝီဂါ ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီဂါ ဘာသာစကား (ဝီဂါ: ئۇيغۇر تىلى‎) သည် ယခင်က အရှေ့တာကီစကားဟု လူသိများသော တာကစ် ဘာသာစကားတမျိုး ဖြစ်သည်။ ဝီဂါ ပါဆို-အာရဘစ် အက္ခရာဖြင့် ရေးသည်။ သုံးစွဲသူ ၁၀-၁၅ သန်းမျှ ရှိပြီး တရုပ်အနောက်ဘက်ရှိ ရှင်းကျန်း-ဝီဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနေ ဝီဂါလူမျိုးတို့ အဓိကသုံးသည်။ 
အသုံးများသောအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ္စတန်နှင့် ဥဇဘက္ကစ္စတန်တို့တွင် ဖြစ်ပြီး ယင်းနိုင်ငံရှိ နယ်စပ်ဒေသတချို့တွင်လည်း ဤစကားကို သုံးသည်။ ရှင်းကျန်း-ဝီဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ ရုံးသုံးစကားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သတင်းစာ၊ ရုပ်သံနှင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များတွင်လည်း သုံးသည်။
↑ "Uyghur". Omniglot. Retrieved6April 2012.
↑ Eberhard, David M.; Simons, Garry F.; Fennig, Charles D. "Uyghur Archived 16 July 2012 at the Wayback Machine.". Ethnologue: Languages of the World. Dallas, Texas: Ethnologue. Retrieved6April 2012.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီဂါ_ဘာသာစကား&oldid=674019" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။